सर्वश्रेष्ठ अनलाइन क्यासिनो बोनस - Gambling Papa
1 एक अनलाइन क्यासिनो बोनस के हो?
2 शुरुआतीहरूको लागि अनलाइन क्यासिनो बोनस गाइड
3 कसरी अनलाइन क्यासिनो बोनस प्राप्त गर्ने?
4 सर्वश्रेष्ठ अनलाइन क्यासिनो बोनस
5 अनलाइन क्यासिनो कुनै जम्मा बोनस छैन
6 अनलाइन क्यासिनो बोनस सल्लाह र युक्तिहरू
यदि तपाईं राम्रो क्यासिनोमा जानुभएको थियो भने, त्यसोभए तिनीहरूले तपाईंलाई प्रोत्साहनका साथ ठूलो हातमा इनाम प्रदान गर्छन्। हाम्रो दृष्टिकोणबाट, बोनस क्यासिनो प्रस्तावहरूले हामीलाई उनीहरूको ग्राहकहरूको कत्ति महत्त्व छ भन्ने कुरा बताउँछ। जब क्यासिनोले बृहत योग्यता बिना ठूलो बोनस प्रदान गर्दछ, यसको मतलब यो हो कि उनीहरू आफ्नो साइटको प्रयोग गर्ने मानिसहरुको ख्याल राख्छन्। अवश्य पनि, आजकल मानिसहरूलाई यो निश्चित गर्न बढी गाह्रो हुन्छ कि बोनस डिल एक विशेष क्यासिनोमा कति ठूलो हुन्छ। तिनीहरूको प्रचुर विविधतालाई ध्यानमा राख्दै, मानिसहरू अचम्म मान्दैनन् कि उनीहरू प्रायः सबैमा उत्तम सम्झौताको बेवास्ता गर्दछन्।
यी मध्ये एकको साथ, तपाईं आफ्नो पैसाको लागि अधिक प्राप्त गर्नुहुनेछ:
सामान्यतया, यी मध्ये कुनै एक बोनस स collecting्कलन गरेर, तपाईं आफ्नो खातामा जम्मा गर्नु पर्ने पैसा थप जान्छ। उदाहरण को लागी, केहि उदाहरणहरुमा क्यासिनोले तपाईलाई इनाम दिनेछ जब तपाईले केहि नि: शुल्क खेलहरू गर्न सक्नु हुन्छ जबसम्म तपाई निश्चित मात्राको टोकन खरीद गर्नुहुन्छ। तसर्थ, तपाईं भन्दा बढि पाउनुहुनेछ अन्यथा हुने थियो।
तपाईं जानुहुन्छ मा निर्भर गर्दै, पुरस्कार प्रकृतिमा फरक हुनेछ:
सबै बोनस एकै तरीकाले कार्य गर्दैन। केहि अवसरहरुमा, तपाइँको पुरस्कारहरु बिभिन्न स्वभावहरु को हुनेछ। यदि तपाईले केहि पत्ता लगाउनु भयो जुन धेरै उपयोगी नहुन सक्छ, त्यसो भए तपाईले ती विकल्पहरू पछ्याउनुमा कुनै अर्थ हुँदैन।
आफूलाई धेरै स्थानहरूमा जानको लागि अनुमति दिएर, तपाईले संकलन गरेका इनामहरूलाई अधिकतम बनाउन सक्नुहुन्छ:
यति धेरै अनलाइन क्यासिनो उपलब्ध छन्, यस्तो देखिन्छ कि पुरस्कार बराबर संख्यामा पनि उपलब्ध थियो। जहाँसम्म धेरै व्यक्तिहरूले उनीहरूको खेल चयनमा आधारित क्यासिनोहरू लिन्छन्, धेरै व्यक्तिहरूले अन्य कारणका लागि तिनीहरूलाई छनौट गर्न थालेका छन्। नयाँ आगमनहरू बीच बढ्ने सब भन्दा लोकप्रिय कारणहरू मध्ये एक क्यासिनोले प्रस्ताव गरेको बोनसको चयन हो।
एक अनलाइन क्यासिनो बोनस के हो?
हामी यी चीजहरू कसरी काम गर्छौं विस्तारका साथ गहिराइको गहिराइ जान्छौं। यस तरीकाले, एक पटक तपाईंले क्यासिनो फेला पार्नुभयो भने, तपाईं त्यहाँ हुँदा तपाईं कसरी यी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भनेर पत्ता लगाउन लामो समय लाग्दैन। तपाईंको भ्रमणको लागि यो जानकारी सिकेर, तपाईं आफ्नो अधिक समय खर्च गर्नुहुनेछ जुन तपाईंले पहिलो स्थानमा त्यहाँ ल्याउनु भयो।
साइटका लागि दर्ता गर्न नयाँ प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन दिन यो तरिका:
सामान्यतया, धेरै बोनसले नयाँ प्रयोगकर्ताहरूलाई तिनीहरूको खाता दर्ता गर्न प्रोत्साहन प्रदान गर्दछ। मानौं तपाईले पहिले कुनै विशेष क्यासिनोको वेबसाइट देख्नु भएको छैन। जब तपाईं तिनीहरूको वेबसाइट भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ, केही तपाईंको पृष्ठको कुनामा तपाईंको आँखा समातिन्छ। तपाइँ आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्, र तपाइँ आफैले तिनीहरूको बोनस पृष्ठमा पाउनुहुनेछ। यस्तो देखिन्छ कि उनीहरूले नयाँ प्रयोगकर्ताहरूलाई खाता दर्ता गर्न टोकनमा १०० डलर प्रदान गर्दै छन्। यदि त्यसो भएमा, त्यसोभए तपाईं जुवा खेल्नुहुनेछ $ १०० को बराबरको केही पनि लगानी नगरी।
अक्सर, तिनीहरूले तपाईंलाई पैसा दिएर पुरस्कार दिन्छन् ताकि तपाईं आफ्नो कुनै पनि नगद लाईनमा राखी बिना जुवा खेल्न सक्नुहुनेछ:
धेरै अवसरहरूमा, तपाइँ तपाइँको खाता मा वालेट मा एक सीधा नगद इन्फ्यूजनको रूपमा पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुनेछ। जब तपाई योग्यको लागि सबै चीज समाप्त गर्नुहुन्छ, पैसा तपाईको वालेटमा झटपट तुरुन्त पठाइएको हुनुपर्दछ। जब सम्म तपाईको बिरामी पर्याप्त निक्षेप प्रमाणित गर्न पर्याप्त हुन्छ, तब धेरै पहिले तपाई आफ्नो हृदयको सामग्रीमा जुवा खेल्नुहुनेछ।
कहिलेकाँही, तीनिहरूले तपाइँलाई तपाइँको कुनै पनि जीतमा एक निश्चित समय सीमाका लागि गुणक प्रस्ताव गर्नेछ:
अवश्य पनि, सबै बोनसहरूले तपाईको खातामा वालेटमा प्रत्यक्ष नगद लाभ प्रदान गर्दैन। वास्तवमा, त्यहाँ क्यासिनो इनाम ग्राहकहरु लाई अन्य धेरै तरिकाहरू छन्। कहिलेकाँही, तपाइँले एक बोनस टोकन प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाइँले अरू बनाउनुभएको कुनै पनि जितलाई गुणा गर्न अनुमति दिन्छ। यी मध्ये एक प्रयोग गरेर, प्रत्येक चोटि तपाईं उत्तम ज्याकपोट क्यासिनो मा ज्याकपटमा ठक्कर दिंदा, यसले तपाईंलाई अझ बढी पैसा दिनेछ। फलस्वरूप।
प्राय: जसो, तिनीहरू खाता दर्ता गर्नका लागि नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको लाभहरू प्रदान गर्छन्:
समग्रमा, खाताको लागि दर्ता गर्नु यी बोनसहरूको लागि सब भन्दा साधारण योग्यताहरूमध्येका एक हुन्। तसर्थ, अवस्थित प्रयोगकर्ताहरूको लागि, तिनीहरू प्राय: सुक्नु पर्छ। धेरै बोनस बिना, यो अवस्थित प्रयोगकर्ताहरूलाई टाढा ड्राइभमा लैजान्छ जसले गर्दा उनीहरू अरू कहिँबाट नयाँ फेला पार्न सक्दछन्।
केही उदाहरणहरूमा, तिनीहरूले अवस्थित खेलाडीहरूलाई वेबसाइट भ्रमण गर्नका लागि पुरस्कृत गर्छन्:
अझै, यस बिन्दुमा, केही क्यासिनोहरूले उनीहरूको अवस्थित प्रयोगकर्ताहरू उनीहरूको व्यवसाय मोडेलको लागि कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भनेर महसुस गर्न थालिसकेका छन्। पहिले नै खाताहरू भएका ग्राहकहरूलाई पुरस्कृत गर्न नयाँ प्रोत्साहन सिर्जना गरेर, तपाईंलाई साइटमा त्यस्तै केही फेला पार्नको लागि यो अनसुना छैन।
शुरुआतीहरूको लागि अनलाइन क्यासिनो बोनस गाइड
त्यसोभए, तपाइँसँग आधारभूतहरूको सभ्य ज्ञान हुनुपर्दछ जुन हामीले सबै वर्णन गरिसकेका छौं। अर्को, यो तपाईको लाभको लागि यि कसरी लाभ उठाउने भनेर अध्ययन गर्ने हो भने यो उत्तम हुन सक्छ। निम्न केही अनुच्छेदहरूमा, हामी केही आवश्यक जानकारी कभर गर्नेछौं। यससँग, तपाईं क्यासिनोहरूको खोजी गर्ने क्रममा भेट्नुहुने सबै फाइदाहरूबाट अधिकतम लाभ उठाउनको लागि तयार हुनुहुन्छ। तपाईंले तिनीहरूलाई देख्ने बित्तिकै, तपाईंलाई कसरी अगाडि बढ्ने भनेर थाहा छ। यदि त्यसरी नै चीजहरू जान्छन् भने त्यसको अर्थ यो हुन्छ हामीले हामीले ठूलो काम गरेका छौं।
पहिलो, तपाईंले राम्रो सम्झौता फेला पार्नुपर्नेछ:
मानिसहरूले पहिलो पटक क्यासिनो उद्योगमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा ठूलो समस्याहरू एक ठूलो सम्झौता खोज्नु हो। किनकी तिनीहरू नयाँ छन्, तिनीहरूलाई सम्भावित हुन यी कार्यक्रमहरू कसरी चलाउँछन्। फलस्वरूप, ती योग्यताहरूको माध्यमबाट जाँदा उनीहरूलाई गल्ती गर्न सजिलो हुन्छ। केहि अवसरहरुमा, मान्छेहरु लाई लाग्छ कि ’em योग्य हुँदैनन् किन कि उनीहरुले सोचे पनि उनीहरु लाई लाग्छ। त्यस कारणका लागि, यो आवश्यक छ कि तपाईंले बोनसको लागि अघि बढ्नु अघि निर्देशनहरू राम्ररी पढ्नु पर्छ। अन्यथा, तपाइँ अन्तमा यो देखाउनको लागी धेरै समय बिना नै ठूलो रकम लगानी गर्नुहुनेछ।
अधिकांश वेबसाइटहरूमा, तपाई तिनीहरूको बोनस प्रस्तावहरूमा समर्पित पृष्ठ पाउन सक्नुहुन्छ:
केहि सम्भावित साइटहरू फेला पछाडि, तपाईं उनीहरूका अभिलेखहरूको माध्यमबाट नयाँ ग्राहकहरूलाई के प्रस्ताव राख्नुहुन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुनेछ। सामान्यतया, तपाईले नयाँ पृष्ठहरू प्रस्ताव गर्ने सबै चीजमा समर्पित पृष्ठ पाउनुहुनेछ। त्यो पृष्ठ प्रयोग गरेर, तपाईं एक विस्तृत क्षेत्र को माध्यम खोज बिना नै एक प्रभावी निर्णय प्रस्तुत गर्न आवश्यक सबै चीजहरू फेला पार्नुहुनेछ। यसैले तपाईलाई नयाँ ब्यक्तिहरुलाई प्रस्ताव गरेको सबै बोनस पत्ता लगाउन लामो समय लिन हुँदैन। हामी धेरै वेबसाइटहरूका लागि यो विधि प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छौं। जब तपाईं ती प्रत्येकको मूल्यांकन गर्नुहुन्छ, केहि नोटहरू स collect्कलन गर्नुहोस् जसले गर्दा तपाईं तिनीहरूलाई सबै कुरा सकिए पछि तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा, यो भुल्न सजीलो छ कि क्यासिनो मध्ये कुन चाहिँ उत्तम प्रस्ताव थियो यदि तपाईं ती मध्ये धेरैलाई मूल्याate्कन गर्नुहुन्छ भने।
बहु साइटहरूमा दर्ता गरेर, तपाईं असंख्य पुरस्कारहरू स collect्कलन गर्नुहुन्छ:
अवश्य पनि, तपाइँ फेला पार्न सक्नुहुन्छ कि एक भन्दा बढी क्यासिनोमा सार्थक बोनस छन्। यदि तपाईं आफैंलाई ती जुत्ताहरूमा फेला पार्नुभयो भने, त्यहाँ प्रत्येकमा दर्ता गर्नमा केहि गलत छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने, हाम्रो दृष्टिकोणबाट यो यस्तो देखिन्छ कि त्यो त्यस्तो विकल्प हो जुन तपाईं त्यस्तो परिस्थितिमा गर्न सक्नुहुनेछ। जब सम्म तपाईं ती सबैमा दर्ता गर्नुभयो, तपाईं प्रत्येकबाट बोनस स to्कलन गर्न सक्नुहुनेछ। यसैले, समग्रमा, तपाईले बोनसको अझ ठूलो मात्रा स .्कलन गर्नुहुनेछ।
कसरी अनलाइन क्यासिनो बोनस प्राप्त गर्ने?
बोनस स्कलन गर्न त्यति गाह्रो हुनु हुँदैन अब हामीले यो कसरी गर्ने भनेर वर्णन गरिसक्यौं। त्यो मुद्दा बाहेक, यी कार्यक्रमहरूमा रुचि राख्ने व्यक्तिहरूको लागि अरू के समस्या हुन सक्छ? धेरै जसो समय, यो सबै तपाईं कसरी निर्देशनहरू पढ्नुभयो तल झर्दछ। तिनीहरूलाई राम्ररी पढेर, तपाईं कुनै पनि गलत त्रुटिहरू रोक्नुहुनेछ जुन अन्यथा देखा पर्दछ। जबसम्म तपाईं तिनीहरूको चरणहरू फिर्ता लिन रमाईलो गर्नुहुन्न, हामी यो भन्न सक्दछौं कि यो अभ्यास सार्थक भन्दा बढी थियो। जबकि अन्य व्यक्तिले तपाईंलाई चेतावनी दिन कोशिस गर्दैनन्, हामी तपाईंलाई रुचि रहन रुचाउँछौं।
सुरू गर्न बोनस खोज्नुहोस् जुन तपाईं संकलन गर्न चाहानुहुन्छ:
यी प्रक्रियाहरू अनुसरण गर्दै, संकलन गर्न उपयुक्त उपयुक्त बोनसको साथ क्यासिनो पत्ता लगाउनुहोस्। एकचोटि तपाईंले उपयुक्त लक्ष्य पहिचान गर्नुभयो, तपाईंले क्यासिनोमा प्रश्न दर्ता गर्नुपर्छ। त्यस तरीकाले तपाईसँग कुनै पनि अगाडि बढ्नु अघि मूलभूत आवश्यकताहरू हुन्छन्।
तब, के आवश्यक हो भनेर निर्धारण गर्न आवश्यकताहरूको माध्यमबाट पढ्नुहोस्:
तपाईले आफ्नो खाता दर्ता गर्नु पछि, क्यासिनो वेबसाइटको पृष्ठमा जानुहोस् जहाँ सबै बोनस सूचीबद्ध छन्। यस पृष्ठमा, प्रत्येक विकल्पमा हेर्नुहोस् जब सम्म तपाईं पछाडि एक पाउनुहुन्न। तपाईंले अनुसरण गरिरहनु भएको विशेषलाई अलग गरेपछि, बोनसका लागि योग्य हुन निर्देशनहरू कहाँ लेखिएका छन् पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसो भए, निर्देशनहरूको सम्पूर्ण सेटको शब्दहरू द्वारा पढ्नुहोस्।
एकचोटि तपाईंले त्यो जानकारी फेला पार्नुभयो, तिनीहरूलाई पूरा गर्न निर्देशनहरूको साथ अनुसरण गर्नुहोस्:
सम्पूर्ण सूची पढी सकेपछि, तपाईं आफैंलाई सुरु गर्न फिर्ता जान सक्नुहुन्छ। तपाईंले लागू गर्नु अघि निर्देशनहरूको समीक्षा गरेर, तपाईंलाई थाहा हुनेछ कसरी अभिभूत महसुस नगरी कसरी अगाडि बढ्ने। यस तरीकाले, तपाईं कसरी पहिले भन्दा धेरै कम चरणहरू दोहोर्‍याउनुहुन्छ यदि तपाईंले पहिले नै निर्देशनहरू पढे बिना यो गर्न प्रयास गर्नु भएको थियो।
सबै काम सकिए पछि तपाईले आफ्नो बोनस प्राप्त गर्नुपर्नेछ:
जब तपाईं दिशाहरूको अनुसरण पूरा गर्नुहुन्छ, तपाईं अन्तिम चरणमा सन्तुष्टिको साथ गइरहनुहुनेछ। वालेटमा रकम निक्षेप नभएसम्म, यदि तपाईं कुनै पनि अत्यधिक उत्साहित व्यक्तिलाई रोक्नुहुन्छ भने उत्तम हुनेछ। जब तपाईं बोनसको लागि आवेदन गर्नुहुन्छ, यो प्रयोगको लागि कोषहरू उपलब्ध नभएसम्म समाप्त हुँदैन। भाग्यवस, हाम्रो सल्लाह सुनेर, तपाईं धोखाधडी बोनसको साथ निराश हुन चाहनुहुन्छ। यसको सट्टामा, तपाईंले अपेक्षा गरेको सबै सुविधाहरूको आनन्द लिनुहुनेछ। यदि तपाईं यी सबै निर्देशनहरू मार्फत पढ्नुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले कुनै अपरिचित चीजको अनुभव गर्नुभयो।
धेरै जसो समय, यो क्यासिनको वेबसाइटमा तपाईंको वालेटमा जान्छ:
पहिले भनेझैं, प्रमाणिकरणको लागि बोनस बुझिसकेपछि, तपाईंले रकम जारी हुनको लागि कुर्नु पर्छ। एक पटक तिनीहरू हुन्, तिनीहरू केहि क्षणहरूमा वेबसाइटमा तपाईंको वालेटमा आउनुपर्दछ। यदि यो भन्दा यो धेरै लामो लिन्छ भने, तपाइँ क्यासिनो वेबसाइटबाट ग्राहक सेवा टीम को लागी तपाइँ विचार गर्न चाहानुहुन्छ। अन्यथा, लेनदेनको साथ केही गलत भएको हुन सक्छ जुन तपाईंलाई कहिले पनि रकम प्राप्त गर्नबाट रोक्छ। जबसम्म तपाईं ग्राहक सेवा टोलीसँग द्रुत रूपमा सम्पर्कमा रहनुहुनेछ, तिनीहरूले तपाईंलाई क्रप गर्ने कुनै पनि समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्षम हुनुपर्छ।
केहि उदाहरणहरूमा यो तपाईको इ-मेल ठेगानामा पठाइन्छ:
यदि यसले तपाईंलाई रकम प्राप्त गर्न केहि बेर भन्दा बढी समय लिन्छ भने, तपाईं आफ्नो ईमेल ठेगाना जाँच गर्न चाहनुहुन्छ तिनीहरू यहाँ सट्टामा आएका छन् वा छैन हेर्न। केहि अवसरहरूमा, बोनस प्रयोगकर्तालाई निर्देशन दिईन्छ तिनीहरूलाई ईमेल ठेगानामा पठाउँदै उनीहरूलाई सिधा वालेटमा जम्मा गर्नुको सट्टा।
त्यहाँ यति धेरै बोनसहरू उपलब्ध छन्, मल मार्फत चलाउने प्रयास धेरै जसो लागि एक अपूरणीय चुनौती हुन सक्छ। त्यसकारण, हामी सबैको लागि गुणस्तरीय सामग्री डेलिभर गर्न मद्दत गर्न धेरै टीम सँगै राख्यौं जोसँग यस्तो कार्य आफैमा लिने समय हुँदैन। सबै जो हाम्रो जुत्ता मा हुन चाहान्छन् को लागी, हामी हाम्रो काम मा गर्व छ। तल, तपाईले हामीलाई केहि कारकहरू देख्नुहुनेछ जुन हामी प्रयोग गरेका प्रत्येक क्यासिनोको न्याय गर्दा हामी प्रयोग गर्छौं। यी दिशानिर्देशहरूको पालना गर्दै, हामी हाम्रो उत्पादनहरूको माध्यमबाट कामको उत्पादन गर्दछौं जुन हाम्रो प्रयासहरूको माध्यमबाट संभव हुन्छ।
प्रत्येक बोनसको लागि निर्णय प्रस्तुत गर्दा हामी निम्न गुणहरू तिनीहरूको गुणस्तरका लागि प्रयोग गर्दछौं
मानौं तपाईं भर्खर एक क्यासिनो भ्रमण गर्नुभयो। तपाईं त्यहाँ हुँदा, तपाईं मद्दत गर्न सक्नुहुन्न तर उनीहरूले कति पुरस्कार प्रदान गर्नुपर्दछ याद गर्नुहोस्। तिनीहरूका सबै नयाँ ग्राहकहरूका लागि, यस्तो देखिन्थ्यो कि त्यहाँ हरेक वर्गमा एक थियो। यद्यपि तिनीहरू कत्ति चाखलाग्दो देखा परे, उनीहरूको लागि ठूलो सम्झौताको सम्भावना असम्भव जस्तो देखिन्थ्यो। अझै, तपाईं मद्दत गर्न सक्नुहुन्न तर ती क्यासिनो छोड्न सक्नुहुन्छ ती दिमागमा ती पुरस्कारहरूको विचारहरूको साथ। यदि तपाईं पछाडि जानुहुन्थ्यो र तिनीहरूलाई नजीक हेर्नुभयो भने, उनीहरूले कति दिने थिए तपाईं आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुनेछ।
क्यासिनोले कस्तो प्रकारको बोनस प्रदान गर्दछ?:
सबैभन्दा पहिला, हामी बोनसको हरेक कोटीहरू हामीले खोजिरहेका संस्थानमा उपलब्ध हुन चाहन्छौं। यस तरीकाले हामी हाम्रा सबै समिक्षाहरू राम्रोसँग वर्गीकृत गर्न सक्छौं, त्यसोभए तपाईंले तिनीहरूलाई अन्तहीन खोजी गर्नुपर्दैन। अन्य संस्थाको साथ, तिनीहरूले तपाईंलाई उनीहरूको सम्पन्न परियोजनाहरूको माध्यमबाट चलाउने खराब कामको साथ छोड्छन्।
बोनस कति ठूलो छ?:
अर्को, हामी विश्वास गर्दछौं कि प्रस्ताव गरिएको बोनसको आकार उनीहरूको अन्तिम मूल्यांकनमा सब भन्दा महत्वपूर्ण कारक हुनेछ। निस्सन्देह, बोनस जति ठूलो हुन्छन्, हामी उनीहरूलाई बढी प्रभावशाली पार्दछौं। त्यस कारणका लागि, तपाईले पाउनुहुनेछ कि हाम्रो उच्चतम रेटिंग प्राप्त गर्ने बोनससँग पनि सबैभन्दा ठूलो प्रस्तावहरू छन्।
बोनसका लागि योग्य हुन के आवश्यकताहरू छन् ?:
जहाँसम्म, बोनस ठूलो हुन गयो, यो एक निर्दोष स्कोर को लागी एक तत्काल योग्यता हुनेछैन। अर्कोतर्फ, एक पटक हामीले ठूलो इनामका साथ केहि भेट्टायौं, यसको निर्देशहरूको जटिलता जाँच गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। जब सम्म यो एक अपेक्षाकृत सीधा प्रक्रिया हो, यसले यसबाट कुनै प्रकारको अनियमितता प्राप्त गर्दैन। जे होस्, यदि निर्देशनहरू बरु ओब्टेज हुन्थ्यो भने, हामीले परिणामको रूपमा उनीहरूको स्तर तल झार्नु पर्छ।
कति जना बोनसहरू नयाँ आगमनमा निर्देशित छन् ?:
धेरै जसो क्यासिनोहरूले आफ्ना नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको लागि यति धेरै बोनस प्रदान गर्दछ, प्राय: धेरै बाहिर दिइने स्कोरहरू यस श्रेणीमा उच्च छन्। जे होस्, यसको मतलब यो होइन कि केही क्यासिनोहरूले यस श्रेणीमा कम स्कोरहरू पनि प्राप्त गर्दैनन्।
के तिनीहरूसँग उनीहरूको अवस्थित फ्यान आधारका लागि केहि छ?:
सबै भन्दा माथि, यदि हामी फेला पार्दछौं कि ती व्यक्तिहरूले प्राय: भ्रमण गर्ने व्यक्तिहरूको लागि ठूलो बोनस प्रदान गर्दछन्, तब समग्र अ score्क सायद उच्च हुनेछ। धेरै क्यासिनोहरूले यी मानिसहरूलाई बेवास्ता गरेको जस्तो लाग्छ, तिनीहरूलाई यस्तो ध्यान दिन क्यासिनो तुरून्त चिन्न सकिन्छ।
तपाईलाई बोनस प्राप्त गर्न कति समय लाग्छ ?:
तपाईंले बोनसको लागि सबै चीज बुझाउनु भएपछि, तपाईंको खातामा कोषहरूको लागि पुग्न कति समय लाग्छ? यदि यो लामो समय अवधिमा लाग्छ भने, हामी त्यसलाई छिटो प्रतिक्रियाको साथ अर्को सेवा भन्दा कम दर्जा दिनेछौं। त्यसोभए, सबैभन्दा धेरै स्कोर गर्ने क्यासिनोहरूमा तपाईंले पाउनुहुनेछ कि निक्षेपहरू द्रुत गतिमा वालेटहरूमा हिट गर्दैछ।
अनलाइन क्यासिनो कुनै जम्मा बोनस छैन
मानौं तपाईं यी बोनस मध्ये एकको लागि दर्ता गर्न मन पराउनुहुन्छ। जे होस्, तपाइँ तिनीहरूलाई तपाइँको क्रेडिट कार्ड जानकारी दिन चाहनुहुन्न। त्यस्तो भावनाको लागि कसले तपाईंलाई दोष दिन सक्छ? यस्तो चिन्ता कम्प्यूटर ह्याकरहरू र पहिचान चोरीको युगमा अनावश्यक छैन। तसर्थ, हामीले बोनसको ’boutमा जानकारीको केही टडबिटहरू पाएका छौं जसले उनीहरूको क्रेडिट कार्ड जानकारी दिन चाहँदैनन्।
धेरै जसो समय तपाईलाई क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर खाता दर्ता गर्न बाध्य पारिन्छ:
जबसम्म तपाइँ देख्नुहुन्न कि वेबसाइट गेमि commission आयोगको साथ दर्ता गरिएको छ, तब तपाइँले तिनीहरूलाई कुनै पनि जानकारी दिनुहुन्न। धेरै जसो क्यासिनोहरूलाई क्रेडिट कार्ड जानकारी आवश्यक पर्दछ, केवल धोखाधडीले तपाईंलाई अधिकतम समयमा जम्मा नगरी बोनसहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ। अवश्य पनि, यसको मतलब यो होइन कि तपाइँले उनीहरूलाई जानकारी दिए बिना कुनै वैध प्रस्ताव कहिल्यै फेला पार्नुहुने छैन। जे होस्, यदि तपाइँ पहिचान चोरीको ’boutमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए यो निश्चित रूपमा हेर्नु हुने कुरा हो।
केही क्यासिनोमा, तपाईले तिनीहरूलाई कुनै पनि जानकारी दिए बिना बोनसहरू फेला पार्नुहुनेछ:
अर्कोतर्फ, यो त्यस्तो प्रस्तावको साथ क्यासिनो अवस्थित भएको जस्तो छैन। जबसम्म उनीहरूसँग गेमि commission आयोगसँग मान्य रजिष्ट्रेसन हुन्छ, तब तपाईं अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि तिनीहरू द्वारा गरिएका कुनै पनि प्रस्तावहरू पनि यस्तै वैध छन्। त्यसकारण यसको रेजिष्ट्रेसन जाँच गरेर तपाईले जाँच गर्न सक्नुहुनेछ कि संस्था कती भरोसायोग्य छ।
अझै पनि, तपाइँको कुनै पनि पछाडि फिर्ता लिन, तपाइँले एक खाता दर्ता गर्नुपर्नेछ अन्तमा सामान्यतया: strong> मा
कुनै तरिकाले तपाइँलाई डोरी पार्ने एउटा तरिका कुनै पनि जीत फिर्ता लिन तपाइँको क्षमता सीमित गरेर हो। मानौं तपाईं बोनस प्राप्त गर्न सक्षम हुनुभयो भने तिनीहरूलाई कुनै क्रेडिट कार्ड जानकारी दिएन। त्यसो भए, तपाईले बोनस प्रयोग गर्नुहुनेछ जस्तो तपाई सामान्य रूपमा गर्नुहुन्छ। केहि राउन्डहरू खेल्नु भएपछि, तपाईं ज्याकपटबाट एक सभ्य रकम र्याक गर्न सक्नुहुनेछ। स्वाभाविक रूपमा, तपाईं त्यस्ता प्रयासहरूको फलहरूको आनन्द लिनको लागि तिनीहरूमध्ये केही फिर्ता लिन चाहानुहुन्छ। जे होस्, एकचोटि तपाईंले रकम फिर्ता लिने प्रयास गर्नुभयो भने, तपाईंले यो खाता पूर्ण रूपमा दर्ता नभएसम्म लक गरिएको पाउनुहुनेछ। पंजीकरण अन्तिम गर्दै, तपाईं एक पृष्ठमा पुग्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई प्रशस्त भर्दछ। यस्तो देखिन्छ कि ती सबै पछि तपाईंको क्रेडिट सम्पर्क जानकारीको साथ समाप्त हुनेछन्। किनकि केही क्यासिनोहरूले तपाईंलाई रकम फिर्ता लिनको लागि अनुमति दिदैनन् जबसम्म तपाईं तिनीहरूलाई जानकारी दिनुहुन्न, तपाईं अन्तमा तिनीहरूलाई यो दिन बाध्य हुनेछ।
अनलाइन क्यासिनो बोनस सल्लाह र युक्तिहरू
तपाइँको क्यासिनो अनुभव को सक्दो धेरै बनाउने सधैं शीर्ष प्राथमिकता हो। निम्न सुझावहरू र युक्तिहरू सिकेर, तपाईंको क्यासिनोमा पछिल्लो भ्रमण अन्तिमको भन्दा अझ राम्रो हुनेछ। यदि तपाईंले उनीहरूलाई तपाईंको अघिल्ला भ्रमणहरूमा प्रयोग गर्नु भएको थियो, तब कसलाई थाहा हुन्छ त्यतिबेलाका ज्याकपट्सहरू कति ठूलो हुने थियो।
तपाईंको मनपर्दो क्यासिनो वेबसाइटहरू निगरानी गर्नुहोस् तपाईंको खेल्नु अघि भर्खरको अपडेटहरू जाँच गर्न:
सामान्यतया, क्यासिनोहरूले नियमित आधारमा उनीहरूले प्रस्ताव गरेको बोनस अपडेट गर्दछ। पृष्ठमा उनीहरूसँग भएको सबै कुरा जाँच गरेर, तपाई सबैलाई धेरै संघर्ष गर्नुपर्दा थाहामा रहनुहुनेछ।
यदि सम्भव छ भने, बोनस एक पटक भन्दा धेरै स collect्कलन गर्न समान वेबसाइटमा बहु खाताहरू दर्ता गर्न प्रयास गर्नुहोस्:
कति वेबसाइटहरु संग तपाइँले खाताहरु दर्ता गर्नुभयो? एक भन्दा बढि क्यासिनोमा रेजिष्टर गरेर, तपाईं प्रत्येकमा पुरस्कारका लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ। यस तरीकाबाट, तपाईं समग्रमा धेरै पुरस्कारहरू प्राप्त हुनुहुनेछ ’cause तपाईंसँग बहु खाताहरू छन्। केहि अवसरहरूमा तपाईले ती दुबैको फाइदाहरू भुक्तान गर्न समान वेबसाइटमा एक भन्दा बढी खाताहरू दर्ता गर्न सम्भव छ। यस तरीकाबाट, तपाई आटामा र्याक गर्न सक्नुहुनेछ अधिकतम बोनस पैसा तपाईले प्रत्येक संस्थाबाट प्राप्त गर्नुभयो।